Isinxibo esiqhelekileyo sommandla weAndean | Iindaba Zokuhamba
UMariela Carril | 31/08/2021 17:00 | Kholambiya, isiko
Funda "Ingingqi yeAndes" kwaye sicinga ngo Mzantsi Melika kunye namazwe aliqela, kodwa ngokwenyani, ngakumbi, ibhekisa omnye wemimandla yendalo emithandathu eyenza iColombia. Ngokucacileyo ibizwa ngegama leentaba zeAndes.
Ngaba embindini weColombia kwaye inamasebe amathathu eAndes, iCentral Cordillera, iNtshona neMpuma. Ewe inemihlaba egcwele iintlambo, amathafa kunye nemiwonyo kwaye yindawo entle kakhulu yelizwe. Abantu balapha banamasiko abo nokunxiba ngohlobo oluthile yenye yazo. Ke, Yeyiphi indleko yommandla weAndes?
1 Ummandla weAndean
2 Isinxibo esiqhelekileyo sommandla weAndes
Njengoko besesitshilo, yenye yeendawo zendalo zaseColombia. Ngaba iintaba ezininzi kunye neendawo ezininzi ezahlukeneyos Kwaye kananjalo, ngu indawo enabantu abaninzi kunye umsebenzi omkhulu wezoqoqosho. Nantsi iMassif yaseVolcanic, iSanta Rosa de Osos Plateau, i-Cauca River Valley, ebizwa ngokuba yiNudo de los Pastos, iSerranía de Perijá kunye neNevado de Tolima, ukubiza nje iindawo ezimbalwa.
Kwingingqi yeAndes indawo enkulu yemithombo yamanzi yaseColombia ikho nemimandla emikhulu yezolimo, kubandakanya Ikofu Axis. Ikwangumhlaba odumileyo Emeralds yaseColombia kunye nommandla apho iBogotá, Medellín kunye neCalí zikhona.
Njengoko besitshilo kwezi ntlobo zamanqaku, akukho ndleko yesintu enye kodwa uninzi. Kwaye konke, ewe, kunxulumene nenkcubeko yendawo kunye nemveli. Ummandla weAndean uhlukile njengoko bekukho syncretism yenkcubeko enkulu: la inkcubeko yemveli Yongezwe ukusukela kumaxesha okoloniyali Inkcubeko yaseAfrika neyaseSpain. Ukuba sidibanisa kwimozulu eyahlukeneyo kunye nembonakalo yomhlaba, isiphumo siyinyani kwaye iyamangalisa imbiza yokunyibilika kwenkcubeko.
Isinxibo esiqhelekileyo siziindidi ngeendidi, kukho ezakudala, zikhona ezintsha kunye nezo zibonakala kuphela kwiminyhadala yenkcubeko okanye ezo zihambelana nomzuzu othile wembali kwaye ayikho enye into. Ke, sinokuthiya ezinye zezona zidumileyo.
Masiqale nge Izambatho eziqhelekileyo zeAntioquia. Ziyimpahla elula, yabantu abasebenzayo. Indoda inxibe njengesiqhelo esingafakwanga nto, ineebhulukhwe ezinde zedenim zisongelwe, ihempe enemikhono nayo isongiwe.
Ezintloko zabo banxibe umnqwazi oneribhoni emnyama, efana neAntioquia, ngocelemba, iponcho elula kunye ifoto (ibhegi yesikhumba. Ngokwenxalenye yabo, abafazi, baqhelekile abavuni bekhofi yaziwa njenge chapoleraBaneblawuzi emhlophe enemikhono ebanzi nentamo ephezulu, ifaskoti ngaphezulu kwesiketi esine-flowery ne-lace, kunye nesikhafu esifanelanayo. Banxibe umnqwazi obanzi, ii-espadrilles kunye nebhasikithi ngesandla.
El Isinxibo esiqhelekileyo sikaBoyaca Kushushu kuba kuyabanda apha. Indoda inxibe ibhlukhwe emnyama, iruana ejiyileyo enyulu, umnqwazi welaphu kunye nehempe emhlophe eneqhiya. Kwimeko apho aya kudanisa khona guabina, umdaniso wesintu, iibhulukhwe zisongelwe, ii-espadrilles kunye nomnqwazi wejipa unxityiwe. Ke yena umfazi? Unxibe isiketi esimnyama esinzima esineeribhoni ezinemibala eyahlukeneyo, ipitikoti emhlophe, iblawuzi enemibala-nye enemikhono, imantilla emnyama kunye nomnqwazi wejipa, phakathi kwezinye izinto ezahlukeneyo.
UTolima unempahla entle enemibala: kwabasetyhini umbhinqo unemibala, kunye neeribhoni zesilika kunye nepitikoti emhlophe ngentambo ebethayo. Banxiba iblawuzi emhlophe nebhibhi, imikhono · / 4 kunye nentamo ephezulu, kunye neeleyisi nangaphezulu kwesiketi ngokwaso. Kwiinyawo, ii-espadrilles, njengamadoda. Banxibe ibhlukhwe emhlophe nehempe kunye nesikhafu esibomvu entanyeni. Ubhaka obomeleleyo, owenziwe ngemicu yendalo, awulahlekanga.
UTolima noHuila ngamasebe amabini kwaye nangona sithetha ngesinxibo saseTolima kukwakho Isinxibo sikaHuila, isinxibo esiqhelekileyo se-opita. Isetyenziselwa ukudanisa i-sanjuanero, umdaniso osemthethweni weReinado Nacional del Bambuco festival eNeiva. Abafazi bahle kakhulu, banesiketi esibanzi se-satin esinee-ruffles ezintathu kunye neentyatyambo ezenziwe ngaphezulu, ubuhlalu kunye nee-sequins kunye nepitikoti, kunye neblawuzi emhlophe enemihombiso engaphezulu. Entloko, iintyatyambo ezinkulu. Indoda yaseHuila ineebhulukhwe ezimnyama, ibhanti lesikhumba, ii-espadrilles kunye nomnqwazi oneehempe emhlophe eneetaki ngaphambili nakwiisilingi. Isikhafu esibomvu sigqiba Nxiba.
I-Santander nayo ineendleko zayo eziqhelekileyo. Abafazi banxibe isiketi esimnyama esimnyama kakhulu, kunye neeribhoni ezimibalabala njengemihombiso kwihem, iblawuzi emhlophe nayo eneribhoni, espadrilles kunye nomnqwazi wejipa. Indoda inxibe ibhulukhwe emnyama esongelweyo, kodwa umlenze omnye uhlala usongwe ngakumbi kunomnye, ihempe emhlophe enebhibhi eboyiweyo nomnqwazi onentsiba entle yepikoko.
ENariño, amadoda nabafazi babonisa amathole abo emoyeni. Eli bhinqa lineblawuzi emhlophe enemikhono emide nesiketi esimnyama, ngaphantsi, kukho ipitikoti enemibala. Banayo i-silika shawl, ivelvet ephantsi okanye izihlangu zoboya, kunye nomnqwazi welaphu. Ukuyifanisa, le ndoda inebhulukhwe emnyama, ihempe emhlophe, kunye nenkunkuma ephothiweyo egxalabeni layo.
ECauca kusetyenziswa iisuti ezimfutshane. Isinxibo esiqhelekileyo saseCauca sesomthonyama ngakumbi kwaye zininzi kuba apha kukho amaqela eentlanga. Kodwa, umzekelo, kukho isinxibo sabakwaGuámbianos: amadoda anesiketi esithe nkqo esiluhlaza esiphakathi etholeni, ihempe yomqhaphu, isikhafu esinombala, umnqwazi wevili, izihlangu okanye izihlangu, ibhanti kunye neeruana ezimbini, enye emnyama kunye enye ingwevu. Isiketi somfazi sime nkqo kwaye simnyama, kunye neeribhoni zesilika ezihambelana nemibala yeshawl. Ihempe ibomvu okanye luhlaza okwesibhakabhaka kwaye banxibe iminqwazi yokuzivavanya kunye nezacholo ezimhlophe.
Ukuza kuthi ga ngoku ezinye Ezona mpahla ziqhelekileyo zommandla weAndes, Ingingqi ehlala amasebe aliqela: konke okubizwa ngokuba Ikofu Axis (Quindío, Risaralda, Caldas nase Antioquia), Huila, Nariño, Cundinamarca, Tolima, Santander, Boyacá nase Norte de Santander.
Ngumhlaba weminyhadala emininzi eyaziwayo kwaye ikule mibhiyozo apho zonke ezi zambatho zimnandi, zintle kwaye zinemibala ziyavela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » America » Kholambiya » Isinxibo esiqhelekileyo sommandla weAndes